Handsome Hong Kong. Okubonwayo komuzi.
Uma uzwa igama elithi "i-Hong Kong" ezikhangayo osekuyisikhathi eside iwine abayithandayo yayo, bame phambi kwamehlo ka namabhilidi omkhulu - uphawu komuzi, esifanekisweni zikaBuddha, Ocean Park, njll
abahambi asemasha nabazali bawo edonsela Disneyland ezithakazelisayo yafunda eHong Kong. Kuleli zwe yinqaba futhi kumnandi, izivakashi kuyakhexisa Heroes Disney opopayi, ezifana Timon kanye Pumbaa. On isitimela ezimibalabala ungakwazi ukugibela kulo Disneyland. Ngaphezu ezikhangayo kukhona zokudlela eziningi, amathilomu kanye nemigoqo. A ezihlukahlukene izitolo zinikeza imikhiqizo yonke ukunambitheka. Akukhona ukuthi kumane kuqondane kule ndawo isibe kakhulu-sithandwa futhi lidumile izingane nabazali babo.
Kodwa Disneyland - akusiwona wonke ezingaba kusimangaze Hong Kong. zalo ezikhangayo ezithakazelisayo futhi eyingqayizivele. Ikhona yini enye indlela kungenziwa kanje kwesithombe Buddha, okuyinto enkulu kunazo zonke emhlabeni? Sakha ke iminyaka 10. Gxilisa ukuphakama kwalo - 24 amamitha. Isisindo kwalesi sithombe kuyinto amathani 203. Zokuhlanza labo livela lapha, isikhencezo ekhethekile nsuku zonke ishaya 108 amabhithi. Lo mkhuba ukhulula samanje kusuka 108 abashone ezehlakalweni. Buddha itholakala ngezihlahla futhi lisendaweni enhle Lantau Island. Esiqhingini efanayo indlu yezindela, okuyinto isikhungo ezinkulu zenkolo - Ngokusho Lin.
Yini ukubona e-Hong Kong okwamanje? Phakathi ezikhangayo ezinkulu kungenziwa ngokuthi Ocean Park. Hambisa ku kungenzeka esizihambelayo omude kunayo yonke emhlabeni. Izivakashi wamangaza ushaka elintantayo endaweni aquarium omkhulu. abathandi Ihlengethwa ukujabulela nabo ezinkundleni zemidlalo yaseshashalazini ulwandle. Ukuze umsebenzi izivakashi exotarium, elinikeza izinhlanzi ezidotshwe ezixhotsheni zamakhorali. Ukuze kwepaki izingane amanzi. Futhi abadala kuyoba ezithakazelisayo ukuze ufunde kabanzi ngomlando China lasendulo, elitholakala ngokusebenzisa ezihlukahlukene izinhlamvu waseshashalazini kuleli paki. Kuyathakazelisa ukubheka uphawu yezwe - panda giant. Leli paki has a lot of ezikhangayo izingane, ugijima imoto ikhebula , nabanye.
Futhi uma labo ababeza Hong Kong, ezikhangayo akuzona ezithakazelisayo kunjalo, kubalulekile ukuya Street abahamba ngezinyawo ubuvila. Lapha phezu esizihambelayo emithathu ikhilomitha ungakwazi ukushayela eduze kweWorld Trade Center, omunye we namabhilidi edume kakhulu emhlabeni. Kanye izitebhisi ezihambayo bayabuka ezisekelweni, zikhona izindawo zokudlela, amathilomu, izitolo kanye nokunye
Yini enye eningayenza ukubona labo abaye beza Hong Kong? Izikhangibavakashi zahlukahlukene. Ngokwesibonelo, Victoria ezimatasa. It kubhekwa isiko oyisibopho ukuze ufike lapha okungenani kanye, ukuze uthwebule inhliziyo isithombe sami namabhilidi yesimanje kanye Villas ukunethezeka ngokuvumelanayo ne emahlathini asezindaweni ezishisayo. Climb kuya isiqongo kungenzeka ikhebula emotweni, okungase kanyekanye sithathe abantu 120. Trip abahambi ngokoqobo obumangalisayo, ngoba engela ukuthambekela ngezinye izikhathi ifinyelela degrees 30!
Iklelisa ezikhangayo Hong Kong, singakwazi ingasaphathwa Jambo yokudlela, Museum of Science, le symphony ntambama izibani nabanye. Abayithandayo abaningi umlingisi omkhulu Chinese Bruce Lee lalinethonya kumnandi ukuthatha izithombe kwi isizinda ukubaza yakhe.
"Ramenky": Moscow ongaphansi komhlaba
Okufanele ukwenze esitimeleni, uma kuzoba eside?
The best zokungcebeleka - ihlobo nobusika. Amaholide ukuze ivumelane yonke akuthandayo
ECroatia evela IDonetsk - Izimfihlo izinga iholide
Izinganekwane elihlobene ne-oak Zaporozhye
Uyakuqonda imithetho cinema: yini trailer?
Iyini inkathi yokuqinisekisa yamamitha kagesi eRussia?
Yini ongayinika umfana oneminyaka yesenkulisa
"Finalgon": imfundo amazwana. "Finalgon": ukusetshenziswa cellulite
Yiziphi misa isikhashana ashukumisayo ezasenkulisa kanye abakwenzayo
I-ultrasound ye-pelvis encane okufanele uyenze: ngaphambi noma ngemuva?
Nikon 5200 ikhamera: i Uhlolojikelele, Ukucaciswa kanye nokubuyekeza amakhasimende
Man ukufunda imicabango yabantu, ibizwa ngokuthini? Kanjani ukufunda izingqondo zabantu?
Izithelo peels: ngabuka
Indlela ukusinda lezinyathelo izinzwa